Maxay tahay sababta Aabbayaasha aysan ula wadaagin farxadda carruurtooda? - BBC News Somali
Maxay tahay sababta Aabbayaasha aysan ula wadaagin farxadda carruurtooda?
Aabe iyo wiilkiisa oo dhawaan dhashay
Waxaa jirta xayeeysiin cusub, taas oo loogga gol leeyahay in lagu dhiirogeliyo sare u kicidda fasaxa wadaagga ee waalidiinta marka uu ilmo yar dhasho.
Tiro lagu qiyaasay 285,000 oo xaas ayaa xaq u leh sanad waliba iney qaataan fasaxa wadaagga ee waalidiinta, laakiin in taasi ay dhacdo waa mid aad u hooseysa, oo gaareysa 2%, sida ay sheegtay waaxda ganacsiga.
In lagu qiyaasay kala bar dadweynaha maba la socdaan sharciga cusub ee la soo rogay ee ay xaqa u leeyihiin, ku dhawaad illaa iyo saddex sano ayey gaareysaa markii lasoo saarey sharciga, sidaasi waxaa sheegtay dowladda UK.
Haatan dowladdu waxey u qorsheyneysaa lacag gaareysa £1.5m, si waalidiintu ay ugu fahmaan qaab ka wanaagsan sidii hore sharcigan cusub ee lasoo rogey.
Khubbarada qaar ayaa sheegaya dhibaatada jirta iney kamid tahay faham la'aan ka heysata waalidiintu waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin, dhaqanka xun ee ay bulshadu aaminsan tahay iyo ganaaxyada lacageed, kuwani dhamaantood waa caqabadaha gadaal ka riixaya waalidiinta inaaney si wadajir ah u qaatan fasaxa wadaaga ee waalidinta.
Ololaha dowladda wuxuu dhiiri galinayaa waalidiinta iney wadaagaan farxadda, waxaa looggu gudbinayaa xayeeysiintaasi internet-ka, baraha bulshada iyo boorarka waa weyn ee jidadka lagu dhajiyo.
Wasiirka ganacsiga Andrew Griffiths ayaa sheegay in sharcigan loogga gol leeyahay in waalidka aabaha aanu gafin fursadda koowaad ee ilmihiisa marka uu dhasho, si uu u il doogsado.
"Milkiilayaasha goobaha ganacsiga sidoo kale iyaguna way ka faa'iideysan karaan sharcigan. Waxaa la ogaaday in u dabacsanaanta marka ay timaado la macaamilidda shaqaalaha ay abuurto farxad, daacadnimo balaaran iyo xoog shaqaale oo waxtar badan." Ayuu yiri wasiirka.
Tom Markwell iyo Leila Reyburn, kuwaasoo u wada shaqeeya hey'ad gargaar oo wax sadaqeysata kuna taal London, ayaa sheegay fasaxa wadaaga ee waalidiinta uu ku abuurey dadabacsanaan iyo farxad.
Kadib markii ay u dhalatey gabadhooda, Pearl, sanadkii 2016-kii, Leila waxey ka qaadatey fasaxii ugu horeeyey shaqada oo 10 bilood gaarayey, si ay u xanaaneyso ilmahooda yar. Tom ayaa markaa kadib isna wuxuu qaatey labo bilood oo fasaxa, si uu qeyb uga noqdo farxadda qoyska.
Waxey sheegeen in fursadani ay Tom siisay kana kaalmeeysay in isaga iyo gabadhiisa yar ay si adag isugu xirmaan, halka Leila ay u saamaxdey in dhanka shaqada ay ka hesho dalacaad.
Dowladda ayaa markii hore ku qiyaastay 2% illaa iyo 8% waalidinta xaqa u leh fasaxa wadaaga ee waalidinta ee qaatey intii lagu guda jirey sanadihii hore ee sharcigan cusub, iyadoo dhanka kale sheegtay dowladda in wali ay fileyso inuu sare u kaco tirooyinkan.
Laakiin waxaa jirta sahan lagu sameeyey waalidiinta qoysaska shaqeeya, hey'ad gargaar oo u ololeysa isu dheeli tirka nolosha arrimaha dadka shaqeeya, ayaa sheegtay in sahan ay sameysay sanadkii hore lagu ogaadey iney sare u qaadista wacyiga dadka ay qeyb ka tahay xal u helidda mushkiladdan.
Xigashada Sawirka, BEIS
Leila Reyburn, Pearl iyo Tom Markwell
Maxay aabayaashu u qaadaneyn fasax?
Madaxa Hey'adda Qoysaska Shaqeeya Sarah Jackson ayaa sheegtay in qoysaska qaar waalidiinta aabayaashu aaney awoodin qaadashada fasaxyada.
"Aabayaasha yiri ma isticmaaleyno qorshahan la dajiyey ee sharcigu fasaxayo, in ka badan saddex jeer, waxey sheegeen in tani ay u sameynayaan in aaney awoodin," ayey tiri.
"Milkiilayaasha kuwaasoo aan awoodin iney hirgaliyaan qorshahan, waa iney markaa mushaarka xiliga fasaxa wadaaga ee waalidinta hoos u dhigaan.
Waalidiin badan oo aabayaala maaney sii joogin shaqooyinkooda, marka ay qaataan fasaxa wadaaga ee waalidiinta, ayey tiri mar kale.
"Haddii ay dowladda arrintani kusaabsan sinaanta dhanka shaqada dhab ka tahay, waa iney la dagaalantaa farqiga u dhaxeeya dhanka mushaarka, waa iney tixgalisaa sidoo kale soo saarista sharci hagaagsan oo simaya cadadka mushaaraadka, xiliga mustaqbalka iyo fasaxa aabbanimo ee fasaxa wadaaga ee waalidiinta,"
Wiil iyo Aabahiisa
Cilmi baaris ay sameysay shirkadda EMW oo qaabilsan dhanka sharciga sanadkii hore, taasoo lagu saleeyey dalab ku qotoma warbixinno madax bannaan, ayaa ku talineysa in ka yar 1% ay gaarayeen waalidiinta xaqa u leh oo ka faa'iideystay qorshahan sanad xisaabeedkii 2016/2017.
EMW ayaa ku talisay in tani ay sabab u tahay dhaqan lagu takoorayo ragga, taasoo ka hor istaageysa iney shaqada fasax ka qaataan, una muujineysa haddii ay fasax qaataan kuwo aaney dhab ka aheyn iney shaqeystaan.
Waaxda ganacsiga ayaa sheegtay iney tahay wax caadi ah in muda ah iney qaadato dhaqan galinta marka sharci cusub lasoo rogo, halka sharciga la qiimeyn doono sida dadka ay ugu dhaqmeen dhamaadka sanadka. up?
Maxaa sababay qaraxii weynaa ee ruxay Beyrut?